Machadka Barashada Saxaafada Xalane oo Shahaadooyin gudoonsiiyay Arday – SBC
Machadka Barashada Saxaafada Xalane oo Shahaadooyin gudoonsiiyay Arday
Machadka Barashada Saxaafada ee Xalane oo ku yaala gudaha Magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxaa maalin nimadii shalay ka qalin jebiyay arday kor u dhaafeysa 25 kuwaas oo qaatay kooras saxaafadeed oo mudo bilo ah u soconayay.
Xaflad lagu gudoonsiinayay Shahaadooyinkooda qalin jebineed ayaa ka dhacday hotelka Amal, waxaana ka qeyb galay qeybo badan oo ka tirsan saxafiyiinta gobolka kuwooda ugu waayo aragsan, macalimiinta iyo maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Xalane, masuuliyiin ka socotay maamulka gobolka iyo kan degmada, iyo marti sharaf kale.
Ardaydii qalin jebineysay ayaa xafladaasi ku soo bandhigay ruwaayado iyo warbixino ku aadanaa qalinjebintooda waxaana ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin shahaado gudoonsiintooda manta.
Mid ka mid ah wariye yaasha SBC kana mid ah saxafiyinta ugu waaya aragsan saxaafada gobolka Maxamed Cali Iiman ayaa isna halkaasi ka soo jeediyay qudbad muhiimad buuxda u yeelatay ardaydii halkaasi ku sugnayd isagoo ugu hambaleeyay soona dhaweeyay saxafiyiinta cusub.
Xildhibaan C/nuur Galeyr waxa uu ka mid ahaa masuuliyiintii halkaas ku sugnayd waxaana uu dhankiisa soo dhaweeyay uguna hambalyeeyay ardayda xafladooda, waxaana uu u balan qaaday in uu la shaqeyn doono.
Ugudambeyntii halkaasi waxaa shahaadooyin aad u qurux badan lagu gudoonsiiyay ardayda qalinjebisay waxaana gudoonsiiyay Mamulka guud ee Dugsiga Xalane Ustaad C/xakiim Maxamed Cumar.
SBC International Bosaaso